မော်ဒယ်တွေကိုနှိမ်ထားတာတွေကိုမကြိုက်လို့ မော်ဒယ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ဟု ပိုင်တံခွန်ဆ – Myanmar Live
မော်ဒယ်တွေကိုနှိမ်ထားတာတွေကိုမကြိုက်လို့ မော်ဒယ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ဟု ပိုင်တံခွန်ဆ
January 15, 2020 January 15, 2020 - by peeraporn y.
နာမည်ကျော်စူပါမော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပိုင်တံခွန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မကဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ နှုတ်ခမ်းနီမလေး တွေအသဲစွဲမော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ဟာ သူအရင်က ရည်ရွယ်ချက်က မင်းသားဖြစ်ချင်ပေမယ့်လည်း မော်ဒယ်တွေကိုနှိမ်တတ်တဲ့ မြန်မာ့အနုပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့် မော်ဒယ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ရင်ဖွင့်ပါတယ်။
“ ကျနော်ကမော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် ကံကောင်းတဲ့ အထဲမှာပါတယ်. ပွဲတွေဘာတွေငှားလို့ မော်ဒယ်ဖြစ်လို့ အနောက်မှာထားထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး.ဘယ်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အနောက်မှာမထိုင်ရဘူး တချို့ကျတော့ မော်ဒယ်ဆိုရင်နှိမ်ထားတာတွေရှိတယ်။ ဟာ ဒီကောင်တွေကမော်ဒယ်တွေ မင်းသားတွေအရှေ့သွား အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ် အဲ့လိုမျိုးရှိလို့လည်း ကျနော်မင်းသားမလုပ်ပဲ မော်ဒယ်မှာ ငါလုပ်ပြမယ်ဆိုပြီး ကျနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာ” လို့ပိုင်တံခွန်ကဆိုပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာဟာ နိုင်ငံတကာမှာမရှိဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတတ်တာဖြစ်ပြီး အဲ့လိုမျိုး ခွဲခြားမှုတွေကိုမကြိုက်ကြောင်းလည်း ပိုင်တံခွန်ကပြောပါတယ်။ “ဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာ အရင်တုန်းကကြုံခဲ့ဖူးတယ် မော်ဒယ်တွေဆိုရင် အရေးမပါတဲ့ပုံစံ ထားတာ သူများနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဗျ ဟိုးအရင်ခေတ်ကတည်းက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုင်းက သီးသန့်ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ဒီဘက်မှာသာတချို့ဦးနှောက်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ မင်းသားကထိပ်ဆုံး ပြီးတော့အဆင့်ဆင့် ဒန်ဆာတွေက နောက်ဆုံး ဒန်ဆာတွေရှေ့မှာမှ မော်ဒယ်တွေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ် အဲ့တာတွေကိုမကြိုက်ဘူး” လို့ ပိုင်တံခွန်က ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူဟာ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပေမယ့်လည်းသူ့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတာရယ် မိမိကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုအားနည်းနေသေးတာကြောင့်လည်း မင်းသားမလုပ်ဖြစ်တာလို့ဆိုပါတယ်။
“အရင်ကတည်းကရည်ရွယ်ချက်က မင်းသားလုပ်ဖို့ပဲ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ် ခေါင်းဆောင်မင်းသား အနေနဲ့ပေါ့ အဲ့လိုမျိုးပေါ့ တကယ်တမ်းအနုပညာအရည်အသွေးတွေပေးတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ချင်တယ် တကယ်တမ်းကျနော်က လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲ ယုံကြည်မှုမရှိတာလည်းပါတယ်. ပြီးတော့ ကျနော်ကလည်း တွေ့တဲ့ နေရာတိုင်းကိုမရိုက်ချင်တာ အဲ့တွေကြောင့်လည်းပါတယ်.ဒိုင်ယာလော့တွေကလည်းအားမရဘူး စကားလုံးပီသမှုပေါ့နော်” လို့ပိုင်တံခွန်က ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : dara.catdumb , Instagram : paing_takhon
Previous Article ဟင်္သာတွင် လူသတ်အလောင်းဖျောက်သည့် ကျန်းမာရေးမှူးဟောင်းကို သေဒဏ်ချမှတ်
Next Article ပလတ်စတစ်ရေစည်ပိုင်းအတွင်း ခိုးအောင်းလိုက်ပါလာသည့် တရားမ၀င်မြန်မာ ၆ ဦးအဖမ်းခံရ!!